Matupi Dictionary -
Entries explained (Thuicaihnah)
Browse Matupi – English
Burmese – Matupi (Chin)
All LanguagesGreekEnglishHebrewMatupi (Chin)Burmese
All Parts of Speech adj (2) adv (267) art (1) cond (4) conj (2) conn (6) interj (10) n (4) nclf (1) nomprt (1) num (12) ordnum (4) post (20) prep (12) preverb (2) pro (22) pro-adj (1) prt (30) subs (4) v (3)
Matupi (Chin): 6360
Search foraword in the Matupi dictionary.
You can search foraword or part ofaword in Matupi or English.
စာလုံးတစ်လုံးရှာရန်ညာဘက်ရှိအကွက်၌၎င်းကိုရိုက်ပါ။ မတူပီ (သို့) အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၌စာလုံးတစ်လုံးသို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကိုသင်ရှာဖွေနိုင်သည်။ ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်မရနိုင်သောအက္ခရာများရိုက်ထည့်ရန်ရှာဖွေမှုအကွက်အထက်ရှိခလုတ်များထဲမှတစ်ခုကိုနှိပ်ပါ။
စာလုံးတစ္လုံးရွာရန္ညာဘက္ရွိအကြက္၌၎ကိုရိုက္ပါ။ မတူပီ (သို႔) အဂၤလိပ္ဘာသာစကား၌စာလုံးတစ္လုံးသို႔မဟုတ္အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုကိုသင္ရွာေဖြနိုင္သည္။ ကီးဘုတ္ေပၚတြင္မရနိုင္ေသာအကၡရာမ်ားရိုက္ထည့္ရန္ရွာေဖြမႈအကြက္အထက္ရွိခလုတ္မ်ားထဲမွတစ္ခုကိုႏွိပ္ပါ။
Matupi (Chin) - English
Finished (no formal publication)
Matupi Dictionary © 2021 Salai Tinaung Takluem®